6337 macluumaadka wakhtiga dhabta ah ee lacagta digital.
Sicirada sarrifka lacagaha oo casriyey 04/03/2021
Jumladaha cusub ee dijitaalka ah ee ugu dambeeyay ee 2021. Dhamaan lacagaha dijitaalka ah ayaa u muuqday February 2021.
Ugu sareeya 10 suuqyada cusub ee dijitaalka ah ee ka muuqday suuqyada lacagta suuqyada maalmaha dhowaan.
Dhaqaalaha cusub ee dhijitaalka ah February 2021
VANCI FINANCE (VANCII) 04/03/2021
BioPassport Token (BIOT) 04/03/2021
EHash (EHASH) 04/03/2021
Degen Protocol (DEGENPROTOCOL) 04/03/2021
Pasta Finance (PASTAFINANCE) 04/03/2021
Luxurious Pro Network Token (LPNT) 04/03/2021
DragonFarm Finance (DRAGONFARMFINANCE) 04/03/2021
RYI Platinum (RYIP) 04/03/2021
Unido EP (UDO) 04/03/2021
Minds (MINDS) 04/03/2021
Oxbull.tech (OXB) 03/03/2021
Paint (PAINT) 03/03/2021
BSCPAD (BSCPAD) 03/03/2021
APYSwap (APYS) 03/03/2021
DeFi Wizard (DWZ) 03/03/2021
Shadows (DOWS) 03/03/2021
Tranche Finance (SLICE) 03/03/2021
Moola (MLA) 03/03/2021
Jetfuel Finance (JETFUELFINANCE) 03/03/2021
Marginswap (MFI) 02/03/2021
Tower token (TOWER) 02/03/2021
Bancor Governance Token (VBNT) 02/03/2021
Flashstake (FLASHSTAKE) 02/03/2021
Urus (URUS) 02/03/2021
MIMOSA (MIMO) 02/03/2021
xDAI (xDAI) 02/03/2021
Fairum (FAI) 02/03/2021
Stacker Ventures (STACK) 02/03/2021
Weather Finance (WEATHER) 02/03/2021
Asia Reserve Currency Coin (ARCC) 02/03/2021
Lacagta cusub ee loo yaqaan 'lacagta digital' waa adeegga internetka ee loo adeegsado 'cryptoratesxe.com', kaas oo daabacda liisaska aaladaha lacagta ee dhowaan soo muuqday, laakiin ka ganacsada isweydaarsiga crypto.
Adeegga tooska ah ee '' lacagta digital 'cusub' adeegga internetka wuxuu adeegsadaa ilo furan oo laga helo isweydaarsiga lacagta digital wuxuuna isku daraa qiimeynta cryptos cusub ee ugu waqtiga dhabta ah.
Waxaan ku qeexnay lacagta digital cusub sida lacag lagu dhisay saldhig ku saleysan mabaadi'da crypto digital, laakiin taas oo aan waligeed ka muuqan ganacsiga sarrifka.
Aaladaha lacagta waxay u muuqataa si joogto ah, laakiin waxay bilaabeysaa inay ku dhex wareegto dadka marka macaamilka isweydaarsiga ay bilaabaan inay dhacaan. Tan iyo xilligii la kala iibsanayay lammaaneyaasha ganacsi ee ugu horreeyay, waxaan iska diiwaangelineynaa lacagta digital cusub waxaanan ku daabacnaa liistada aaladaha lacagta cusub.
Si ka duwan ah "Lacagta ugu dambeysa ee digital" adeeg, kaasoo muujinaya qiimaha hal qadaadiic cusub oo lacagta digital cusub soo muuqday, Lacagta ugu kharashka badan adeegga wuxuu muujinayaa qiimaha dhammaan lacagaha loo yaqaan 'aaladaha lacagta hadda jira' ee ugu yar qiimaha
Nidaam cusub oo loo yaqaan 'lacagta digital', xitaa kalfadhiga ugu horeeya ee ganacsiga, waxaa laga yaabaa inuusan ahayn midka ugu jaban lacagta digital.
Liistada aaladaha lacagta ee ugu dambeeyay si joogto ah ayey isu beddelayaan. Muuqaalka loo yaqaan 'crypto' cusubi wuxuu dhacaa hal jeer maalintii ama hal mar toddobaadki ama hal mar bishii.
Adeegso adeegeena "internetka cusub ee lacagta digital" oo bilaash ah!
Dhaqaalaha cusub ee dhijitaalka ah March 2021
Aaladaha lacagta cusub ee March 2021 sida 04/03/2021 waxaa wakiil ka ah xulasho 10 ka cryptos cusub ee kala-sooca qaab cusub marka loo eego da'da sii kordheysa.
Nooca cusub ee loo yaqaan 'crypto' waxaa lagu soo bandhigaa qaab bilowga ah ee ganacsiga ugu horreeya ee lacagtan oo ku saabsan is-weydaarsiga lacagta digital ee adduunka.
Liiska liiska cusub ee aaladaha lacagta ayaa maanta loo soo bandhigay March 2021.
Waxaa suurto gal ah in berrito lacagta digital cusub soo muuqan doonto iyo qiimeynta aaladaha lacagta cusub ee cusub ay ka duwanaan doonaan berrito.
Had iyo jeer booqo bartayada internetka si aad u hesho macluumaad cusub oo ku saabsan aaladaha lacagta cusub ee adeegga cusub ee aaladaha lacagta maanta.
Dhaqaalaha cusub ee dhijitaalka ah 2021
Aaladaha lacagta cusub ee 2021 waa aaladaha lacagta oo ka muuqday kaliya 2021.
Aaladaha lacagta cusub waxay u muuqdaan marar badan. Mararka qaarkood dhowr aaladaha lacagta cusub ayaa laga yaabaa inay muuqdaan isla maalintaas. Laakiin astaamo caddaalad ah oo muhiim ah waa in la ganacsado 'lacagta digital' iyo sida firfircoon.
Maxaan ugu baahanahay lacagta digital cusub oo aan la soo iibsan oo aan la iibin, oo aan cidina u baahnayn?
Waxaan ku qeexnay 'aaladaha lacagta cusub' 2021 sida lacagaha aan ka jirin 2020, iyo 2021 isweydaarsiga ugu yaraan hal mar.
Waxaan u aragnaa dhalashada lacagta digital inay tahay maalintii markii ugu horeysay lagu ganacsado isweydaarsiga lacagta digital.
Hadday ku jirto 2021 ma jirin lammaaneyaal ganacsi oo crypto ah oo ku saabsan is-weydaarsiga adduunka, ka dib kuma dari doonno 'crypto' nooca nooca ah liiska cusub ee aaladaha lacagta ee 2021.
Lacagta digital cusub
Lacagta cusub ee loo yaqaan 'lacagta digital' waa crypto, taas oo aan waligeed lagu beddelin isweydaarsiga, laakiin ganacsiga ku yaal waxaa la qabtay ugu yaraan hal mar.
Maal-gashadeyaal badan ayaa isku dayaya inay raadiyaan aaladaha lacagta cusub. Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee aaladaha lacagta cusub had iyo jeer waa mid aad u firfircoon. Haddii aad ku biirto xaraashka lacagaha cusub ee loo yaqaan 'crypto', ka dib waad ku maarayn kartaa inaad ku iibsato crypto qiimo aad u hooseeya. Waxay dhacdaa in sicirka loo yaqaan 'lacagta digital cusub' uu si firfircoon u korayo.
Maalgashadeyaasha la shaqeeya aaladaha lacagta cusub marmarka qaarkood waxay helaan macaash dheeraad ah. Laakiin khatarta ah in lacag lagu maal galiyo lacagta digital cusub sidoo kale waa mid sare.
Waa muhiim in laga mid noqdo kuwa ugu horreeya ee lagu ogaado markii lacag cusub ay ka muuqatay ganacsiga crypto.
Tan darteed, adeeggayaga internetka ah "lacagta digital cusub" ayaa la abuuray. Adeegsiga adeegga cusub ee lacagta digital waa bilaash.
Jadwalka aaladaha lacagta cusub
Jadwalka qaab dhismeedka aaladaha lacagta ee ugu dambeeyay waa qaabka keydka macluumaadka liiskayaga ugu cusub ee aaladaha lacagta.
Shaxda cusub ee crypto waxay muujineysaa magaca loo yaqaan 'lacagta digital' iyo taariikhda xaraashka ugu horreeya.
Markaad gujiso mid ka mid ah waxyaalaha cusub ee aaladaha lacagta ee shaxda, waxaa laguu wareejin doonaa bogga macluumaad faahfaahsan ee lacagta digital cusub.
Shaxda ah aaladaha lacagta cusub
Shaxdii ugu dambeysay ee lacagta digital waa qalab kale oo bilaash ah oo internetka ah kaasoo soo bandhigaya liiska iyo qiimaha lacagaha cusub ee aaladaha lacagta.
Garaafka cusub ee aaladaha lacagta wuxuu muujinayaa heerka 10ka ugu sarreeya ee crypto cusub marka loo eego natiijooyinka ganacsiga ee isweydaarsiga lacagta digital.